PRISM: तपाईंको सामाजिक मिडिया रूपान्तरण सुधार गर्न एक फ्रेमवर्क | Martech Zone
वास्तविकता यो हो कि तपाईं सामान्यतया सामाजिक मिडिया च्यानलहरूमा बेच्नुहुन्न तर यदि तपाईं समाप्ति प्रक्रियाको एक पूर्ण अन्त्य लागू गर्नुहुन्छ भने तपाईं सामाजिक मिडियाबाट बिक्री उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ।
हाम्रो PRISM step चरण रूपरेखा एक प्रक्रिया हो जुन तपाईं सामाजिक मिडिया रूपान्तरण सुधार गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यो लेखमा हामी रूपरेखा जाँदै छौं Step चरण फ्रेमवर्क र प्रक्रिया को प्रत्येक चरण को लागी उपयोग गर्न को लागी उदाहरण उपकरणहरू बाट कदम।
यहाँ PRISM छ:
तपाईंको PRISM निर्माण गर्न तपाईंसँग राम्रो प्रक्रिया, सामग्री र सही उपकरणहरू हुनु आवश्यक छ। PRISM को प्रत्येक चरणको लागि त्यहाँ विभिन्न उपकरणहरू छन् जुन प्रासंगिक छन्।
पी पीपीका लागि
सामाजिक मिडियामा सफल हुनको लागि तपाइँसँग एक दर्शक हुनु आवश्यक छ। तपाईंले एक निरन्तर आधारमा दर्शक निर्माण गर्न आवश्यक छ तर तपाईंले श्रोताहरू सान्दर्भिक छ भनेर निश्चित गर्न श्रोताको विश्लेषण पनि आवश्यक छ। त्यहाँ प्रासंगिक छैनन् भने १ लाख अनुयायीहरू हुनुको कुनै मतलब छैन।
प्रयोग गर्न को लागी एक उदाहरण उपकरण हो एफिनियो जुन तपाइँको ट्विटर अनुयायीहरूमा एक विस्तृत ब्रेकडाउन प्रदान गर्दछ। तपाईं नि: शुल्क उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंसँग १०,००० भन्दा कम अनुयायीहरू छन्। प्रत्येक प्लेटफर्मका लागि तपाईले नियमित रुपमा श्रोताको विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि यो प्रासंगिक छ।
सम्बन्धका लागि आर
तपाइँको श्रोतालाई तपाइँको ध्यानाकर्षण गराउनको लागि, तपाइँ तपाइँको श्रोताको साथ सम्बन्ध बनाउनु पर्छ। तपाइँ सामग्रीको प्रयोग गरेर पैमानेमा सम्बन्ध निर्माण गर्नुहुन्छ वा कुञ्जी प्रभावकर्ताहरूसँग १ देखि १ आधारमा सम्बन्ध बनाउनुहुन्छ।
सम्बन्ध निर्माण गर्न तपाईले एक सामाजिक मिडिया प्रबन्धन उपकरण प्रयोग गर्नु पर्छ जस्तै Agorapulse। एगोरापुल्स्ले तपाइँको स्ट्रिममा व्यक्तिलाई पहिचान गर्दछ जुन प्रभावकर्ताहरू वा व्यक्तिहरू हुन् जुन केवल तपाईंसँग नियमित रूपमा संलग्न हुन्छन्। तपाईं १ देखि १ आधारमा सबैसँग सम्बन्ध बनाउन सक्नुहुन्न त्यसैले तपाईं प्रभावकर्ता वा संलग्नकर्ताहरूमा नजर राख्नु पर्छ।
म इनबाउन्ड ट्राफिकको लागि
सामाजिक मिडिया च्यानलहरू बिक्री उत्पादनको लागि होइन त्यसैले तपाइँले सामाजिक मिडियाबाट तपाइँको वेबसाइटमा ट्राफिक ड्राइभ गर्न विशेष युक्तिहरू लागू गर्न आवश्यक छ। तपाईं अन्य साधनहरू मार्फत ट्राफिक पनि ड्राइभ गर्न सक्नुहुनेछ, उदाहरणको लागि, ब्लग प्रयोग गरेर।
तपाइँ वरिपरि सामग्री सिर्जना गर्न कुञ्जी शव्द पहिचान गर्न मद्दतको लागि एक उत्तम उपकरण हो Semrush। उदाहरण को लागी, तपाइँ तपाइँको प्रतियोगीहरु को नाम मा राख्न सक्नुहुन्छ र शीर्ष १० कुञ्जीशब्द संयोजनहरु फेला पार्न सक्नुहुन्छ उनीहरुको साइटमा यातायात चलाउन। तपाईं त्यसपछि यी कुञ्जी शब्दहरू वा यस्तै खालका वरिपरि सामग्री सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
सब्सक्राइबर र सामाजिक retargeting को लागी एस
तपाईंको धेरै सामाजिक आगन्तुकहरू पहिलो भ्रमणमा खरीद गर्दैनन् ताकि तपाईं तिनीहरूको विवरणहरू प्रयास गर्न र क्याप्चर गर्न आवश्यक पर्दछ ईमेल प्रयोग गर्दै. Optinmonster एक उत्तम ईमेल क्याप्चर उपकरण उपलब्ध छ।
यदि आगन्तुकहरूले तिनीहरूको ईमेल ठेगाना प्रदान गर्दैन भने तपाईं अझै सक्नुहुन्छ फेसबुकमा विज्ञापनको साथ यी आगन्तुकहरूलाई पुन: बनाउनुहोस् वा अन्य प्लेटफर्महरू।
मोनेटाइजेशनको लागि एम
त्यसोभए तपाईंले बिक्री फनेलहरू निर्माण गर्नु पर्छ जुन तपाईंको आगन्तुकहरू वा ईमेल ग्राहकहरूलाई बिक्रीमा रूपान्तरण गर्दछ। मुद्रीकरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश मध्ये एक तपाईंको फनेलको प्रत्येक चरणको लागि मापन सेटअप गर्दैछ। रूपान्तरण यो गर्नका लागि एक उत्तम उपकरण हो।
सामाजिक मिडिया एक दर्शक निर्माण गर्न तपाईं को लागी महान छ, तपाइँको कम्पनी, तपाइँको उत्पादन र सेवाहरु।
तर ... यो बिक्री उत्पादनको लागि पनि उत्कृष्ट छ यदि तपाईं प्रक्रियाको अन्त्य प्रक्रिया पूरा गर्नुहुन्छ भने। तपाईंले सामाजिक बेच्ने प्रक्रियाको सबै चरणहरू बुझ्नुपर्दछ र विशेष युक्तिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र प्रत्येक चरणको लागि विशिष्ट उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
के तपाई यस फ्रेमवर्क को सोशल मीडिया बिक्री को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ?
टैग: उन्नत सामाजिक मिडियारूपान्तरण फनेलइनबाउन्ड मार्केटिङइनबाउन्ड ट्राफिकमुद्रीकरणPRISMसामाजिक मिडिया फ्रेमवर्कसामाजिक मिडिया मुद्रीकरणसामाजिक मिडिया सम्बन्धसामाजिक retargetingग्राहक retargeting